Ipaseji- Ifenitshala- Ukuphefumlelwa
I-vestibule yindawo yokuqala oza kuyibona wena okanye undwendwe lwakho xa ungena kwindlu. Kungenxa yoko le nto yindawo ethi okuninzi ngawe. Hlela i-vestibule yakho ngokokuthanda kwakho. Kule mihla, unokukhetha kwinani elikhulu leeseti zeholo zeendlela ezahlukeneyo. Ungayihombisa le ndawo ngendlela yangoku, yeklasikhi, yokhuni okanye isitayile seediliya. Ukongeza, unokuthatha isigqibo ngemibala kunye nobungakanani beekhabhathi kunye neeshelfu. Kodwa i-vestibule ayisiyonto nje eyonwabisayo ebonakalayo yamehlo. Ikwenza umsebenzi wokugcina obalulekileyo. Sigcina izihlangu unyaka wonke, izithinteli-moya, kodwa amaxesha amaninzi nezinye izinto ezahlukeneyo. Iindledlana zeewall kunye neewotshi ke ziyinxalenye ebaluleke kakhulu yendlu.
I-vestibule yindlela yokucinga ekhaya lakho. Xa unikezela ngaphakathi, akufuneki ulibale iholo, ebaluleke kakhulu kwiimeko ezininzi. Yindawo apho ugcina khona iibhatyi, izihlangu, uya kujonga esipilini okokugqibela ngaphambi kokuba uphume uye ehlabathini. Yeyiphi ifanitshala eyakha iholo yakho kwaye kutheni kufuneka ufikelele kwisitulo sokuhlala? Ukusetyenziswa kwesitulo Olu luhlobo olusebenzayo lwefanitshala, […]
Iibhentshi eziseHholo lendlela
Ngomhla wama-28, 2020 NgoFebruwari 16, 2021 admin
Iibhentshi zezona zinto zingena kwifashoni kwiholo. Ukuza kuthi ga ngoku, uninzi lwabantu alukhange luwele kulo mkhwa, kodwa sele bengena kumakhaya ethu. Kutheni ziluncedo kangaka kwaye zisenza lula ubomi bethu? Siza kukuxelela oku nokunye okuninzi kwinqaku elilandelayo. Intuthuzelo naxa unxiba izihlangu Awunyanzelekanga ukuba ube nomgangatho kwaye ngakumbi ifenitshala entle kuphela kwigumbi lakho lokulala. Kutheni ungayiniki […]
Yeyiphi ifanitshala yeholo?
Xa unikezela ngendlu okanye indlu, kufuneka ucinge ngomnyango, okt iholo. Enkosi ngefanitshala efanelekileyo, uya konga indawo kungekuphela kwikhabhathi yakho. Undwendwe luqala ukuqaphela "isango lokungena". Uyilo lwefanitshala olulungileyo lunokwandisa i-vestibule yakho kwaye lwenze umfanekiso omhle wekhaya lakho kwabanye. Iholo kufuneka lingqinelane nesitayile sendlu yakho. Unayo […]
1 2 3 izithuba abadala